Ngumuphi umbala wokugubha Izinja Zonyaka Omusha we-2018, isithombe: Esigqokeni sendlela yokugubha uNyaka Omusha 2018 kuya ezibonisweni zezinkanyezi
Ngumuphi umbala okumele uhlangabezane nezibonakaliso zezinkanyezi ezihlukahlukene zonyaka omusha wezi-2018 (i-fashion photo)
Uyayikholelwa noma cha, kodwa umbuzo wumbala onjani ozogubha uNyaka Omusha 2018, ngokuqinisekile, akushiyi unganandaba. Futhi akuyona kakhulu izincomo zezinkanyezi zekhalenda elisempumalanga, njengesifiso sokulandela imikhuba yefashini. Ngaphezu kwalokho, i-palette yangempela yembatho yezingubo ngokwemibono ye-Pantone Institute ngezindlela eziningi ihambisana neseluleko sabasebenzisa izinkanyezi. Ngakho kungani ungazisebenzisi leli thuba elimangalisayo futhi ungahlanganisi ibhizinisi ngenjabulo - khetha isambatho sethando futhi ubonise uphawu lwe-2018. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma ama-shade langempela ahambisani nokubukeka kombala wakho, akudingekile ukuba ugqoke ingubo noma ingubo yombala ojwayelekile. Kuvumelekile ngokuphelele ukuzikhawulela ngokwesevisi noma izicathulo embala wesibonakaliso sonyaka. Ngakho, izingubo lapho imibala okudingayo ukhetha izimpawu ezahlukene ze-zodiac ukuze u-Eva Wonyaka Omusha unikeze izimanga eziningi ezimnandi futhi udonsa Inja Yobumba Ephuzi.
Ngimiphi imibala oyidingayo ukuhlangabezana noNyaka Omusha 2018 Inja Ephuzi: yiziphi izingubo ezingcono kakhulu zokuzikhetha
Ake siqale ngezincomo ezijwayelekile mayelana nokuthi yimiphi imibala oyidingayo ukuhlangabezana noNyaka Omusha we-2018 Yellow Dogs kanye nezembatho okuzokhethwa kuzo ama-shades. Njengoba kulula ukuqagela, i-Yellow Earth Dog, eyaziwa ngo-2018, izobazisa ngokukhethekile labo abahlonipha uhlelo lwayo lombala. Abalingisi bezinkanyezi baseMpumalanga baqinisekisa ukuthi ngokuvumelana nesifanekiso sezilwane kuzoba yizicathulo zezinga eliphuzi nelomnyama. Ngesikhathi esifanayo, ochwepheshe be-Pantone Color Institute ngezindlela eziningi bavumelana nale mkhuba futhi phakathi kwephalethi ebanzi kakhulu ye-shades yangempela, kunezinketho ezifanayo. Isibonelo, ngemibala yabo ungathola imibala ezoba nzima ukumelana neNja, i-Autumn maple, iGranny, i-Rum Oil, i-Copper tan, i-curry le-Lemon, i-oliva yomnqumo. Indlela yokubheka lezi shades ingaqondwa kalula ngokuletha izithombe ezifakwe emabhukwini ngamagama abo amahle noma ngokubuka isithombe ngezansi.
Ezingubo zemibala oyidingayo ukuhlangabezana Nonyaka Omusha we-2018 Yellow Earth Dog
Ngokuvamile, i-shades ehlongozwayo yokugqoka ingcono kakhulu futhi ivinjelwe. Ngakho-ke, uma ukhetha izingubo ezikhanyayo, ke uqaphele ukukhethwa okulandelayo, ukuthi yimiphi imibala futhi ugqoke ukuthi yiziphi izimpawu ezingcono ukukhetha ukuhlangabezana noNyaka Omusha we-2018. Okokuqala, kufanelekile ukunaka ukuhlanganiswa kwegolide ne-black shades enhlanganisweni eyodwa. Lokhu kuyindlela yokukhetha lapho ama-classic abamnyama ehambisana ngokuphelele nezwi langempela legolide. Ngaphezu kwalokho, ingubo kulesi sikhundla izoba yinto efanele kunoma yimuphi umcimbi wonyaka omusha. Okwesibili, i-ocher e-muffled, lwesinaphi, ama-shade omnqumo akubi kakhulu kuhlangene nezimbali ezikhanyayo ze-orange nezibomvu. Ngakho-ke, uma ufuna ukugubha uNyaka Omusha we-2018 ngengubo ebomvu, ungawusondeza ngekhanda lesikhumba sombala womnqumo, futhi ubheke umangalisa nje.
Ngumuphi umbala wokugubha uNyaka Omusha we-2018 ngezibonakaliso ze-zodiac, ukucacisa isibonakaliso sonyaka ozayo, inja
Abaningi bezinkanyezi bakholelwa ukuthi ngokuvumelana ngokuphelele ekukhetheni izingubo zonyaka omusha kufanele futhi kuqondiswe ngesikali sombala esiwuphawu lwesignali yakho yezinkanyezi. Njengoba umbala wombala we-2018 ozayo ozolile futhi ukhululekile, singasho ukuthi imibala yawo ngeke iphikisana nama-palettes cishe zonke izibonakaliso ze-zodiac. Kodwa-ke, kuyasiza ngaso sonke isikhathi ukwazi ukuthi umbala ozogubha uNyaka Omusha wezi-2018 ngezibonakaliso ze-zodiac ukuze uqinisekise ukuthi unyaka ozayo eNjazini ngokuqinisekile. Kodwa khumbula, lezi yizincomo ezijwayelekile futhi awudingi ukuzilandela ngokungaboni kahle. Kungcono kakhulu ukuhlunga ulwazi oluhanjisiwe futhi ukulixhumanisa nokuzwa kwangaphakathi kwakho.
Iziphi izimpawu ze-zodiac ezizogubha uNyaka Omusha 2018 ukuze ziveze uphawu lweNja ephuzi yonyaka ozayo
Ama-Aries. Iphalethi yombala obomvu-ophuzi yiyona eholayo kubameleli bale mbonakaliso. Ngakho-ke, ngeke kube nezinkinga ngokukhetha umthunzi olungile ongayikuphikisana nemibala esemqoka ye-2018 ezayo. Okuthandayo kufanele kunikezwe amathoni aphuzi-orange ngezwi elibomvu elimemezelekile. Futhi, izazi zezinkanyezi ngo-Eva Wonyaka Omusha zinikeza ama-Aries ukubheka igolide ne-shades shades.
I-Taurus. Uhlelo lombala lwe-Taurus luvinjelwe kakhulu. Ilawulwa yi-shadow shades et pastel eluhlaza okwesibhakabhaka nokuhlaza. Kodwa kukhona ukuhlelwa kwe-Taurus futhi kuhlanjululwe nge-orange ephuzi ephuzi nephuzi, ephelele ukuhlangana ne-New 2018.
Amawele. Iphalethi lezinkanyezi lezinwele lifana nolovu - imibala ecishe ibe yilawo wonke ama-spectra agxilisa abameleli balo mbonakaliso we-zodiac. Ngakho-ke, lapho ukhetha ingubo Yonyaka Omusha, bangakhetha ngokuphepha phakathi kwephuzi elikhanyayo, i-peach orange kanye nemon. Kodwa kusukela kumabhantshi ama-brown kanye ne-beige shades kungcono ukwenqaba-ziyi-counter-indicative kwiGemini engokomzwelo futhi ekhanyayo.
I-Cancer. Uhlu oluhlaza okwesibhakabhaka olunama-gray shades amakhulu kakhulu Rakov lifaka ukukhetha okunzima kwezingubo zonyaka omusha ngo-2018. Abamele kwalesi sibonakaliso izinkanyezi zincoma ukuthi zikhethe umbala omhlophe noma omhlophe ongathathi hlangothi, ongahlanjululwa ngezimhlobiso zegolide ezinkulu noma izesekeli eziphuzi.
I-Lion. Uma othile enenhlanhla nge-palette yombala we-2018 ezayo, yilokho izingonyama. Futhi nakuba izinkanyezi zibiza ngokuthi umthunzi ohamba phambili waloluphawu olubomvu, amathoni e-orange-yellow agcwalisa cishe lonke iphalethi lezingonyama. Futhi okwenzelwe wona kuzoba kokubili okubandayo nokufudumele okuphuzi ne-orange, okusiza kakhulu ukukhetha izinhlobo ezahlukene zembala zokubukeka.
Intombi. I-palgo ye-Virgo ingumnyama futhi iqukethe ama-shades aphansi okuhlaza okwesibhakabhaka, okwesibhakabhaka, okubomvu, nokumpunga. Kodwa kuyo kukhona indawo yamathoni omnundu nomnqumo, okuyiqiniso okuyokwenza ukunambitha njenge-Dog Earth Dog.
Isikali. Njengoba kudingekile ukuba isibonakaliso somoya, kwi-palette yeSikali imibala yasezulwini ikhona: i-blue, blue, azure, pink pink. Ngakho-ke, izazi zezinkanyezi zincoma abamele lesi sibonakaliso ukuthi bakhethe kuNew Year's Eve izingubo ezingahambisani ne-shadow shades, isibonelo, ubisi noma isanti. Bese uhambisana nesithombe somnene ngezesekeli zesilinganiso esimnyama.
Scorpio. Ngokuba ama-Scorpios, abalingiswa bangobunzima obubomvu, obuluhlaza, obuhlaza, obuhlanganiswa emgqeni we-palette enombala omnyama obomvu negazi. Ngakho-ke, inguqulo enhle yengubo yePhathi Lonyaka Omusha kufanele ihlanganise inhlanganisela ehlakaniphile yamathoni anombala ne-orange.
Sagittarius. Umbala wombala we-Sagittarius uqukethe cishe ama-dark shades of violet, aluhlaza, aluhlaza okwesibhakabhaka nokubomvu. Ngakho-ke, kunengqondo ukuthi ngo-Eva Wonyaka Omusha abamele lesi sibonakaliso kufanele baphisheke kangcono emashumini obomvu obumnyama, okungahlanjululwa ngamathoni we-chocolate uma befisa.
I-Capricorn. Iphalethi yezinkanyezi ivinjelwe kakhulu eCapricorn. Futhi nakuba kukhona ama-hues ama-gray-brown azojabulisa iNjazane Yobumba Ephuzi, kufanele ifakwe izesekeli ezicacile. Isibonelo, nge-palette enikeziwe inhlanganisela enhle yesardadi, ocher, umbala wegolide elimnyama.
I-Aquarius. Imibala ehlukahlukene i-Aquarius ingaba nomona ngisho neGemini. Ngakho-ke, abamele lesi sibonakaliso ngo-Eva Wonyaka Omusha 2018 bangakwazi ukugqoka kalula ngemibala ephuzi ephuzi neyolintshi. Ikakhulukazi efanelekayo ku-Aquarius kuyoba yi-shades yabo efudumele.
Ama-pisces. Ama-pisces nge-pallet eluhlaza okwesibhakabhaka-eluhlaza okwesibhakabhaka ngoNyaka Omusha we-2018 awunayo enye into ongayenza ngaphandle kokugqoke izingubo ezimhlophe noma ezigqoke izingubo ezingavamile. Futhi izesekeli kuphela zemibala ephuzi nebomvu izobasiza ukuba bakhonze umusa wesibonakaliso sonyaka ozayo.
Manje ukuthi uyayazi umbala ozogubha iNjabulo Yonyaka Omusha ka-2018, ungakwazi ngokuphepha ukukhetha izingubo zokugqoka. Kodwa ungakhohlwa ukuthi umthunzi wangempela wengubo noma enye ingubo akuyona isiqinisekiso seholide elihle kanye noNyaka Omusha ojabulisayo. Ukubonakaliswa konyaka kwakukusekela kakhulu kubaluleke kakhulu ukuthi ucabange ukuthi ubani ozobhekana nalo, futhi ngumuphi umbala okufanele ugqoke izingubo zokugqoka. Kodwa-ke, ithemba elikhulu lokuthi izincomo zethu zidingekile kuwe futhi kuzoba usizo ekukhetheni ingubo yezibonakaliso ezahlukene zezinkanyezi.
Indlela yokukhetha i-champagne yoNyaka Omusha 2017: ukulawula ukuthenga komkhiqizo
Imincintiswano yoSuku Lomama ngeholidi esikoleni nase-enkulisa - Iziqephu zemincintiswano ehlekisayo yabomama nezingane
Siyakuhalalisela nge-Kurban Bayram 2016 ngama-sms, izithombe, izinkondlo kanye ne-prose. Imikhonzo engcono kakhulu ngesiRashiya naseTatar
Izithombe ezinhle noMaslenitsa 2018: ngokuhalalisela futhi ngaphandle kombhalo
I-Stengazeta (iphosta) yoSuku lukaMama 2017 enezandla - izifanekiso nezithombe ze-enkulisa nesikole
Amakhadi wokubingelela nezithombe kuLwesine olulungile ngo-2018 ngezincwadi ezibhalwe phansi nezifiso
Siyakuhalalisela ngoSuku loSitimela ngo-2016 evesini nakubambisene nabo abahlekisayo, abancane nabasemthethweni
Isikhumba esinempilo, izikhambi zabantu
I-Horoscope Yonyaka Ka-Tiger we-Scorpion
Ubhapathizo lwezingane, uma abazali bezinkolo ezahlukene
Indlela yokuzizwa uqiniseka ekuphileni
I-French pie kish nge-bacon kanye ne-zucchini
Isobho se-ushi ne-shrimps
Izesekeli zokugqoka okubomvu
I-Chinese Gouache Massage
Ukukhuluphala kwezingane nokudla okunempilo
Indlela yokuvumelanisa nomsebenzi omusha, noma izimfihlo zokuqala okuphumelelayo
Indlela yokukhetha umbhede olungile
Imfundo yasenkulisa yezingane
Ukubikezelwa ngendoda kumuntu oshadile ngoKhisimusi: kanjani ukukhaphela intombazane ngothando
Ukudla kwehlobo "Honadeyde"
Ama-gene nama-chromosomes adluliselwa kumntwana